महामानव शंखधरको प्रतिमामा देशघातीहरुको फूलमाला नचढोस् – indepth.com.np
नेपाल संवत्का प्रवर्तक शंखधर साख्वाःको प्रतिमा ।
हिजोआज तिहारको समय हो । यो तिहारलाई नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो पर्व दीपावली पनि भनिन्छ । यो उल्लासमय चाड अझ नेपाल देशकै ऐतिहासिक स्वनिगः (काठमाडौं उपत्यका) का आदिवासी नेवाः समुदायको लागि विशेष महत्व छ । तिहारलाई नेपालभाषामा स्वन्ति नखः भनिन्छ । यही स्वन्तिमा नै पारुको दिन नयाँ वर्ष सुरु हुने विशेष पर्व हो । नेपाल संवत् नयाँ वर्ष ११४१ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
नेपाल संवत्को सुरुवात गर्ने शंखधर साख्वाः अनि वर्तमान बाहुनवादी सत्ताले यो संवत् र नेपाली संस्कृति म्हास्न गरिरहेका कुकृत्य र यो कुरा जानीजानी पनि बाहुनवादी सत्ताका हतियार बनी आफ्नो स्वाभीमान भुलेर तुच्छ स्वार्थ पूर्ति गर्न लागिपरेका नेवाः ‘अगुवा’ र कलंकित जनजाति अभियन्ताहरुबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको छु । यो मेरो लेखाइमा यहाँहरुको व्यापक बहस छलफलको अपेक्षा गरेको छु ।
यो विश्वको अरु संवत्हरु जस्तै चन्द्रमासमा आधारित संवत् हो । यो संवत्मा १५ गते ठ्याक्कै औंशी र ३० गते ठ्याक्कै पूर्णिमा पर्छ । यो संवत् प्रकृतिसँग सम्बन्धित संवत् हो । यो संवत्को पात्रोमा यो दिन यो गर्नुपर्छ, यो दिन यी कुराहरु गर्नुहुँदैन, यो दिन यो खानुपर्छ, यो दिन यी कुराहरु बार्नुपर्छ भनी किटान गरी लेखेको प्राकृतिक रुपमा नै सिकाउने र सिक्ने संवत् हो । यो संवत् कुनै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति विशेषसँग मात्र होइन यो आम नेपाली जीवनसँग सम्बन्धित संवत् हो । यो संवत् राष्ट्रिय एकताको संवत् हो । यो संवत्मा नेपालको हावापानी जनजीवन र नेपालीपन झल्केको मौलिक संवत् हो ।
यो कुनै राजा, महाराजा र सामन्ती शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित संवत् होइन । ऐतिहासिक कालखण्डमा जनतालाई ऋणमुक्त गरी स्थापना भएको मुक्ति संघर्षसँग सम्बन्धित संवत् हो । पूर्वी एसियामा चीन, सिङ्गापुर, थाइल्याण्डलगायत धेरै देशहरुमा हाम्रा गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, शेर्पाहरुले चलाइरहेको तिब्बती संवत् जस्तै जनावर र पंछी वर्षमा आधारित संवत् चलाइरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ईस्वी संवत् चलाइरहेका छन् । यो आधारमा त्यहाँ जीवन व्यवहारका कुनै पनि कुराहरु विवादित र खण्डित भएको छैन ।
नेपाल संवत् र शंखधर साख्वाः
शंखधर एक नेपाली जनताका मुक्तिकामी अगुवा थिए । तात्कालिन समयमा राज्यको ऋणमोचन गर्ने कुनै विचारकहरुभन्दा माथिका उच्चकोटीका महान मानवहरुमध्ये एक हुन् ।
उसले चाहेको भए त्यस समय आफ्नै नाममा संवत् चलाउन सक्थे । आफूसँग भएको पैसा अरु कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर झन ठूला शोषक बन्न सक्थे ।
राज्यको कुनै ठूलो पद पाएर झन् सामन्ती बन्न सक्थे तर उनले केही पनि स्वार्थ नलिई राजा र राज्यसँग जनताको ऋण मुक्त गर्न आफ्नो निजी सम्पत्ति खर्च गर्ने जस्तो महान कार्य गरे ।
तात्कालिन समयमा उनले गरेको उक्त कार्य शान्तिको खोज गर्ने बुद्ध, क्रान्तिको खोज गर्ने मार्क्सहरु, धर्मको खोज गर्ने अकबर र येशुहरु, कम्प्युटर र हवाईजहाज आविस्कार गर्ने Charles Babbage र Wright Brother हरु फोन र सफ्टवेयर आविस्कार गर्ने Graham Bell र Lady Ada, Alan Turing हरु र ड्रोनका आविस्कारक Abraham Karem र अन्य भौतिक विज्ञान आविस्कार गर्ने उच्चकोटीका मानवहरुमध्ये पनि नेपाल संवत् जस्तो असाध्यै विज्ञानसम्मत संवत् स्थापना गरी प्रचलनमा ल्याउनु भएकोमा हामी सबैले उनको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
बाहुनवादी राज्य र नेपाली संस्कृति
नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको कथित एकीकरण अघिसम्म आफ्नै लय र गतिमा विश्वका अरु देशहरु जस्तै गतिवान भई ऐतिहासिक धरोहरहरुको निर्माण र संरक्षण गरिएका थिए ।
अहिले जति पनि सम्पदाहरु छन् ती सबै इतिहासको त्यही कालखण्डमा निर्माण गरिएका हुन् ।
१३ औं र १८ औं शताब्दीको बीचमा त हामी युरोपको कुनै पनि राष्ट्रहरुभन्दा कम थिएनौं । मानव विकासको अमूल्य समय पछिल्लो २५० वर्ष जो हरेक कोणबाट हेर्दा नि महत्वपूर्ण थियो । यहीं २५० वर्षमा हामीले समृद्धि र निरन्तर अघि बढ्ने विकासको पाइला होइन कसरी एकल जातीय, एकल भाषा, एकल संस्कृति अरु जात, भाषा र संस्कृतिलाई लाद्ने भन्नेबारेमा नै सोच्दै राज्य चलिरहेको र त्यो शाहवंश, राणावंश हुँदै अहिले पनि निरन्तर जारी छ ।
विश्वमा प्रायः सबै देशको एकीकरण राजधानीबाट गाउँतिर कब्जा गर्दै अघि बढेका थिए तर अपवाद नेपालमा मात्र एकीकरण गाउँको विपन्न संस्कृतिले राजधानीको सुसम्पन्न संस्कृतिमाथि हैकम जमायो । फेरि राज्य विग्रह होला कि भन्ने आशंकामा नेपाल संवत् र यो संवत्सँग अन्तरंग सम्बन्ध भएका संस्कृति, भाषा, धर्म र कलाबारे भ्रम छर्ने, अपहेलना गर्ने, बिगार्ने र म्हास्ने काम क्रमशः जारी राखेको छ ।
नेपालमा धेरै वटा सरकार परिवर्तन भयो । तैपनि राज्यको मूल सारमा परिवर्तन भएको छैन । यहाँ धेरै कुराको गन्थन गर्नुभन्दा पनि १० वर्षको जनयुद्धको दौरान सबैभन्दा पेचिलो मुख्य मुद्दा भनेकै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र मधेसी, महिलाको मुद्दा हो । तर मुद्दा उठाउने शक्ति स्वयम् पटकपटक सत्तामा पुगे पनि यी मुद्दाको सम्मानजनक हल गर्नुको साटो मुद्दाहरु छाडेकोमात्र होइन हिजो आफैले विरोध गरेर जनतालाई आन्दोलनमा उतारी आफूहरु सत्तासीन भएपछि हिजोकै महाराजाहरुको शैलीमा जालझेल गर्ने, विरोध गरे दमन गर्ने पुरानै परम्परा कायम गरिरहेका छन् । अब त खुलेआम सत्ता पक्ष नेकपा (नेकपा) प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जुनसुकै नाम दिए पनि बाहुनवादीहरुले हाम्रो संस्कृतिमाथि अन्तिम प्रहार गरिरहेका छन् । विगत ११ वर्षदेखि पारु र द्वितीया जुधाइदिने, हाम्रो मोहनीको कुछिभ्वय नै गायब गर्ने, नेपाल देशको नाममा स्थापित संवत्लाई नेवारहरुको संवत् भनेर हेप्ने, विकासको नाममा हाम्रो जग्गाजमिन हडप्ने आदि काम भइरहेका छन् । तर हामी स्वयं आदिवासीहरु भने यी तमाम जालझेल, थिचोमिचो, हेपाहा प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा नबुझी उनीहरुको षड्यन्त्रको ठूलो गोटी भइरहेका छौं । कोही कोही त बुझेर पनि यी देशद्रोही र जनघातीहरुको मतियार भइरहेका छन् ।
२५० वर्षदेखि आदिवासीहरुको भाषा, धर्म, कला–संस्कृति म्हास्न नियतपूर्वक दमनमा उत्रिएको सत्ता केही वर्ष अगाडिदेखि त असाध्यै द्रूत गतिमा हगमडि बढिरहेको छ । तर हाम्रो पुनःस्थापनम र प्रतिरोध आन्दोलन भने क्रमशः सिथिल भैरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेकै हाम्रो आन्दोलनमा छिरेका सत्ताका पहरेदार र दलालहरुले नै आन्दोलनको नेतृत्व हत्याउने गरेका कारणले होभन्दा केही फरक पर्दैन ।
अझ सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के छ भन्दा कुनै अमुक ब्वाँसाहरुले जातीय मुक्तिका कुरा बोल्यो, लेख्यो भने कुनै अमुक स्यालहरुले हाम्रो भेषभुषा लगाएर भिन्तुना, तासीडेलेक वा ल्हासो फ्याफुल्ला भन्यो भने अहिले नै हाम्रो खोसेका अधिकार फिर्ता भएको जस्तो प्रचार गर्ने, खुसी व्यक्त गर्ने एउटा ठूलो जमात नै आदिवासी जनजातिहरुको समुदायबाट नै खडा गर्न बाहुनवादी सत्ता सफल भइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा जाति, भाषा, संस्कृतिको समानताको आन्दोलन झन् झन् अप्ठेरो र संगीन अवस्थामा आइपुगेको छ ।
यी तमाम प्रतिकूल परिस्थितिलाई चिर्दै आदिवासी जनजातिहरुले सर्वप्रथम सत्ताका दलाल र मतियारहरुको समयमा नै पहिचान गर्ने, ती भ्रष्ट र दलालहरुबाट हाम्रो समानताको आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन भन्ने चेतना फैलाउने, नेपाल संवत् र यो संवत्का सकारात्मक पक्षहरु के के हुन् भनेर सचेतना फैलाउने र सांस्कृतिक महत्वका कार्यक्रमहरुमा बाहुनवादी सत्ताका प्रमुखहरुको आतिथ्य बहिष्कार गर्दै लग्ने काम आजदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा (नयाँ वर्ष) न्हु दँको उपलक्षमा स्वनिगःका धेरैजसो शंखधर साख्वाःका सालिकहरुमा माल्यार्पण गराउन प्रमुख अतिथिमा राज्य प्रमुख डाक्ने चलन जस्तै चलाएका छन् । जुन असाध्यै गलत भैरहेको छ किनभने जुन सत्ताले नेपालको मौलिक संवत् हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, हाम्रो भूमिमाथि धावा बोलिरहेका छन् उनै सत्ताका मुख्य मान्छे हाम्रो प्रमुख अतिथि ? यो पनि कहीं मिल्ने कुरा हो ? सुहाउने कुरा हो ? अनि ती मान्छेहरुलाई अतिथि बनाउन पाएर अहोभाग्य ठान्ने हामी ? के यसरी नै हाम्रो गुमेको स्वाभीमान फिर्ता हुन्छ ? अहँ यो हुनै नसक्ने गल्ती हामीबाट भइरहेको छ । यो गल्ती तुरुन्त सच्याउनु पर्छ ।
नेपाललाई अझ समृद्धितिर दोहो–याउने हो भने एकचोटी पुनः पहिचानसहितको संघीयताको लागि संघर्ष गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । तर त्यो संघीयता ल्याउने संघर्षको नेतृत्व अमुक पार्टी वा बाहुनवादी सोच भएका बाहुनहरुमात्र नभई हामी जनजातिभित्रका बाहुनवादीहरुलाई समेत पराजित गर्दै हाम्रो आफ्नै नेतृत्वमा गर्नुपर्छ । यस्तो बहस धेरै पहिलादेखि भइरहेको भए पनि मूर्त रुप लिन नसकिरहेको अवस्थामा यो नयाँ वर्ष ११४१ ले निश्चित आकार ग्रहण गर्न सकोस् भनी पुनः न्हु दँया भिन्तुना !
Related Topics:FeaturedNepal EraNepal SambatShankhadhar SakhwaSpecial